Ukuhlukaniswa amasiko - i-AFRIKHEPRI
Ukuphi ukudla namuhla okunempilo?
ulwesihlanu, july 10, 2020
CUmlando we-Kama kanye nobukhulu bawo wobukoloni uyithinte kanjani impilo yabantu be-Kmt abavela kuwo wonke umhlaba namanje. Ukuhlukaniswa ngokwamasiko kungachazwa njengokuncishiswa kwenkululeko, amalungelo abantu abalulekile atholakala ngumuntu noma iqembu lezenhlalo ngaphansi kwengcindezi yezakhi zesiko ezingapheli eziyihlisela emvelweni noma esigabeni esikhulu.
Umphumela oqondile ukulahleka kobunikazi benkambiso yalesi sizwe okuphoqelekile ukuthi silingise kulowo owayehlala kuso ngaphambili. Njengokungathi abakwaKmt babephethwe yi-Stockholm syndrome, ebonakala ngokuziphatha okuxakile komuntu ohlukunyezwayo ozwela aze ahlonishwe ngokubulawa kwakhe.
UMarcus Garvey, ongungqongqo wePan-Africanism, uthe abantu abangawazi umlando wayo bafana nesihlahla esingenazimpande. Ngempela, kude nemvelaphi yayo, amasiko, amasiko nezinkolelo zawo, noma ngubani angahlanganiswa. Thatha isibonelo sendoda, eyenze ingozi enkulu, yawela ekhefini yaphaphama yalahlekelwa ngokuphelele yimemori, ezweni elingayazi. Akazi ukuthi uqhamukaphi ngakho-ke ukwazi ukukhomba kuphela nalabo abahlala kuleli. Uzoholelwa ukuthi amukele imikhuba yabo futhi ngokuhamba kwesikhathi uzogcina efana nabo ngokwamasiko, azithobe entweni yonke ayengayazi ngaphambili. Ngakho-ke abamnyama bathande ukufana, futhi lokhu kungazwisiseki, nenani labamhlophe elalibeka ebugqilini base bekoloniwa. Lokhu kuyabonakala empilweni yakhe yansuku zonke, noma ngabe uhlala enenkinga yokukuvuma, kuyingxenye yakhe, yomlando wakhe.
Ukungakhohlwa ukusho ukuthi izwe ngalinye lase-Afrika linophawu lwalo lwamasiko ngokwesiko labantu balo. Imbangela enkulu ukuthi abantu abamnyama kufanele bazikhohlwe bona ukuze babekhona futhi bahlonishwe ngesithunzi esithile sabantu. Ukuqothuka kumvumela ukuba akhuphuke ileli kwezenhlalo, ukwaba le nkambiso okungeyona eyakhe kumsebenzela ukuthi athuthuke emphakathini. Impela, yize kuphele ubugqila nokwenziwa amakoloni, umuntu omnyama uhlala akhumbula ukuthi umuntu omhlophe nguyena ophumelela empilweni, lowo onolwazi oluphelele futhi ikakhulukazi amandla okuthatha isinqumo sokuthi ngubani ofanele noma cha ube nendawo ekhethekile emphakathini. Kepha njengoba isaga sase-Afrika sisho: ucezu lokhuni lungase luhlale emfuleni, alusoze lwaguqulwa lwaba yi-caiman.
Isibonelo, izilimi zethu zesifunda zase-Afrika zivame ukubekwa ekugcineni ngemuva kwesiFulentshi nesiNgisi. Abanye abazali abase-diaspora bancamela nokuthi izingane zabo zingafundi ulimi lwazo lwase-Afrika ukuze zihlanganiswe kangcono eNtshonalanga. Ulimi luyindlela yokuqala yesizwe yesizwe ngoba ngayo indlela yokucabanga yabantu yonke iyakhonjiswa. Kwezilimi, iSapir-Whorf hypothesis ibuye iveze ukuthi ulimi lungakhombisa indlela yomuntu yokucabanga nokucabanga kwakhe. Ngakho-ke, isiko nendlela yokuphila ithonya indlela yokukhulumisana nangolimi, imibono nokuziphatha komuntu kungabonakala. Ulimi-ke lusivumela ukuthi sigcine amasiko ethu. Ukukhuluma ngalokho kwabaseNtshonalanga ukuhlanganisa umhlaba waseNtshonalanga. Ukuzibandakanya ezweni langaphandle akusho ngokuhlelekile ukuthi kufanele uvule ikhasi ukhohlwe ukuthi uvelaphi.
Mayelana nokubukeka komzimba, abaningi bavame ukubukeka njengabantu abamhlophe, baqonde izinwele zabo futhi bakhumule isikhumba kuyilapho beshaya indiva ubungozi bamakhemikhali. Kungani umuntu omnyama nowesifazane abanombala wakhe we-ebony nezinwele ezi-afro bekungabi ngumuntu omuhle ngokwemvelo? Kungani uzizwe unesidingo sokukhanya kalula, ngezinwele ezibushelelezi nezici ezinhle? Imithombo yezindaba kanye nemikhiqizo yezimonyo yamanje ayisisizi kangako kule ndawo kepha abantu abaningi ngokwengeziwe bazama ukwenza umphakathi omnyama ukuthi wamukele ukuthi kumele ubongwe njengoba unjalo ukuze phoqelela.
Lapho ungazi ukuthi uvelaphi, kunzima ukwazi ukuthi uyaphi
Njengoba kuchaziwe I-Naturi Ebonye Buyela emvelweni, amakhasi 33 & 34 , izinwele zinomfanekiso obalulekile e-Afrika, ngezinye izikhathi izinwele zezinwele zivunyelwe ukubona ukuthi umphakathi noma isifunda siphila umuntu [totemic, clan, yezinwele zezenhlalakahle]. Uma sekuthunjwa, izigqila (abesilisa nabesifazane) zizophunga izinwele zazo ukuze zingakwazi ukuxhumana. Ngaphezu kokulahleka kwezinwele, kwakungaphezu kwakho konke ukungabi nobunikazi ukuze kubuthakathaka futhi kubangcolise.
Lapho izigqila zithatha izigqila ezweni lakubo futhi zithuthela emazweni aseMelika, ukuwela kwahamba izinyanga eziningi, kaningi ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha. Izinwele ezigqotshweyo zalezi zinceku zinesikhathi sokukhula, futhi labo ababengenqunywe izinwele, babekhulile. Singazicabangela kalula ukuthi izinwele zibukeka kanjani ezingazange zigeze, zifakwe noma ziphathwe izinyanga ezingaphezu kwezinyanga eziyisithupha.
Futhi lokhu ezimweni eziphakemeyo lapho izigqila zazithuthwa khona. Ekufikeni kwabo eMelika, bahlupheka ngaphezu kwesimo sezigqila, umbhali ogcona ngezinwele zabo ezingcolile nezingenangqondo. Ngaleso sikhathi, esinye sezijeziso ezenziwa ngamakhosi ezincekelweni zokuphinda zigcwaliswe amakhanda awo kwisisombululo samanzi ne-caustic soda. Ngaphandle kokushiswa, ezinye izigqila zabona ukuthi lokhu kulungiswa kwehlisa izinwele ngokusula. Ukuqala kokulungiswa kwezinwele zanamuhla kuzalwe ”.
Umlando Wokugqilazwa, Ukuhlaziywa Kwenkulumo Yesikhalazo se-Euro
33,48€ kukhona kusitoki
I-1 isetshenzisiwe kusuka ku- € 33,48
Thenga i-33,48 €
kusukela ngoJulayi 10, 2020 4:16 pm
Usuku lokukhulula 2008-04-01T00:00:01Z
Usuku lokushicilela 2008-04-01T00:00:01Z
Isiphakamiso sokuhoxiswa kwamazwe ase-Afrika avela ku-ICC samukelwe
Kungani abantu base-Afrika kufanele bafunde izincwadi ezinganeni zabo?